Nekuda kwekushandiswa kwemashizha asingachashandi, ingangoita 13% yevashandisi vatsva vanoona matambudziko ehukama hwekuenderana Linux Vakapindwa muropa
Nekuda kwekushandiswa kwemashizha asingachashandi, vangangoita 13% yevashandisi vatsva vanowana matambudziko ehukama hwehardware
Pasina mubvunzo rimwe rematambudziko makuru muLinux - hukama hutsva hwevashandisi inyaya yekuenderana Hardware uye kunyangwe sekutsigirwa kwakawanda kuri kuwedzerwa neimwe vhezheni itsva yeLinux (mwedzi miviri yega yega), dambudziko iri rinoramba riri chikonzero nei vashandisi vazhinji vachipedzisira vatama kubva kuLinux.
Uye ndezvekuti kunyatso kutaura nezve kernel, ndiko kuti, chikamu chinobata zviwanikwa zvemakomputa uye chinoshanda sebhiriji rekutaurirana pakati pezvinhu zvakasiyana uye chikamu chisingaonekwe chehurongwa hwekushanda, vhezheni yazvino haina kuiswa mune mazhinji Kugoverwa kweLinux.
Uye zvakare, mazhinji acho akavakirwa pakuisirwa vhezheni dzeLTS kana anotarisana nezvikwata zvepasi-zviwanikwa, saka kusanganisira yazvino vhezheni yeLinux haisi sarudzo inoshanda.
Chikonzero chekubata pamusoro penyaya iyi ndechekuti Linux-Hardware.org ichangobva kuburitsa ruzivo rwakavakirwa pane iyo yakaunganidzwa telemetry dhata kwegore, izvo kushandisa 'yechinyakare' kana 'shanduro dzekare' dzinogadzira matambudziko ekuenderana ine Hardware ye13% yezvitsva kuvashandisi vatsva.
Muenzaniso wakanyatsojeka wemamiriro acho ndewevazhinji vevashandisi veUbuntu umo mukati megore rapfuura vakapihwa vhezheni 5.4 yekernel. Izvi zvinopfuura gore nehafu kuseri kwazvino vhezheni 5.13 maererano nerutsigiro rwehardware.
Nepo kune rumwe rutivi kugovera kuri Rolling-Kuburitsa (kuenderera kuburitsa) kunopa kwete chete matsva matsva, asi iyo yese system package inogara ichigadziriswa, asi iro chete uye rakakura dambudziko ravanotambura nderekushomeka kwavo mukurumbira zvichienzaniswa nekumwe kugovera.
Linus amene anobvuma kuti ichi ndicho chikonzero sisitimu yekushandisa iri kunetseka kuzvimisikidza pachayo muindasitiri yemakomputa yedesktop.
Uye kunyangwe isu taigona kupembedza iyo yakataurwa nhamba yakapihwa neLinux-Hardware.org haina kunyatsoita kana kuti zviyero zvakaratidzwa hazvimiriri vese vashandisi veLinux, nekuti kusvika pamwero wakakura mhedzisiro yakapihwa inoenderana neLinux-Hardware's pachavo kuunganidzwa. Org yakatorwa na vese avo vakashandisa iyo «hwinfo» chishandiso.
Ndokunge, kwete wese mushandisi weLinux ane chishandiso chakaiswa uye mhedzisiro yacho yakavakirwa paboka diki revashandisi, asi kunyangwe zvakadaro zviyero zvakaratidzwa zviri kuodza moyo.
Sezvo semuenzaniso munzvimbo yeBT zvishandiso (bluetooth) zviyero zvakaratidzwa zvaizotiudza kuti munzvimbo ino Linux inovhara pamusoro pe95% (iyo yepamusoro penzvimbo dzese), asi kune dzimwe nzvimbo zviyero zvinoratidzwa zvinongova nenjodzi.
Nezve musoro wenyaya vatove vashandisi vazhinji vataura zvavakaona maererano nenyaya dzekuenderana neLinux uye kunyangwe vashandisi vazhinji vakabvumirana kuti kushandiswa kweshanduro kusati kwazvino kweLinux kwakonzera matambudziko nechimwe chinhu chehardware, ko kana chikakwezva (zvirinani pachayo) ndechekuti kune vashandisi vanosheedzera neimwe nzira.
Ndokureva, kana vachishandisa vhezheni yazvino, vane matambudziko nechimwe chinhu chehardware, icho chisingafanirwe kuitika, kunze kwekunge michina yako iine zvikamu kubva makore anopfuura makumi maviri apfuura, mamiriro acho angaite.
Ndine dambudziko rakapesana nelaptop yangu. Kernels nyowani kupfuura 5.0 inokonzeresa kuti iyo system iturike mushure meminiti kana maviri anomhanya pane bhatiri simba. Ndiri kufungidzira imwe mhando yesimba manejimendi nyaya, asi sezvo pasina matanda ari kugadzirwa, zviri chaizvo zvisingaite kugadzirisa. Ndiri kunyatsoziva kuti 5.0 haisisiri "kutsigirwa", asi "tsigiro" haireve chinhu kana sisitimu isiri kunyatso shanda.
Chekupedzisira, ndinofanira kutaura kuti iyi mamiriro ichave chingwa uye bota chero bedzi vagadziri vezvinhu zvehardware vasiri ivo vanopa rutsigiro rweLinux uye iyi inyaya yakaoma ingaitika.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, Ini ndinokukoka iwe kuti uone kana kujoina hurukuro yakaitwa mukati reddit foramu kana iwe unogona kutarisa ruzivo rwaakaburitsa Linux-Hardware.org.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Nekuda kwekushandiswa kwemashizha asingachashandi, vangangoita 13% yevashandisi vatsva vanowana matambudziko ehukama hwehardware
Ini ndinofunga kuti dhatabhesi repasirese rinofanirwa kuitirwa madhiraivha abviswa kubva ku linux kernel, ayo anogona kuiswa kana iko kusapindirana kana kushomeka kwekuzivikanwa kwechinhu kuchinge kwazivikanwa, ipapo inoenderana inotsvaga pakati penzvimbo dzese dzemutyairi dze linux.
Iyo Audacity inoenderera inoenderera. Maforogo maviri akaonekwa